The Voice Of Somaliland: Deg-Deg - Ardaydii dugsiga Sh. Bashir oo mudaharaaday
Deg-Deg - Ardaydii dugsiga Sh. Bashir oo mudaharaaday
(Waridaad)-Waxaa mudahaaraday ardadii Dugsiga Hoose / Dhexe ee Sh. Bashiir ee Magaalada Hargaysa. Ardada waxaa kiciyey , kadib markii Ina Rayaale wada Baayacay Guryihii Indian Line-ka oo dhan ayaa baayaci gaadhay agagaar Dugsiga SH. Bashiir Guryihii ku yaalay, taasaa keentay in ardadii la geliyo in xataa xaraashka iyo iibka uu ku jiro Dugsiga SH, Bashiir.
Ardadii Dugsiga ayaa saaka kacday, iyadoo ay macalimiintoodu arrinta iibka ku war geliyeen, una sheegeen in xataa laga yaabo in aan laga xishoon in Dugsiga la iibiyo, waayo waxaa soo baxay warar xaraashka Guryaha Dawladda barbar socda oo la leeyahay Dugsiga ayaa la dayactirayaa, taasoo aysan xogogaal u ahayn maamylka Dugsigu.
Aradadii waxaa ay xidhay wadadii weynayd ee badhtamaha magaalada Hargeisa ee xagga shacabka u kacaysay ee Madaxtooyada hor-maraysay, waxay ku dhawaaqayaan DAWLAD XUN DOONI MAYNO, BOOBKA HANTIDA UMMADDA DOONIMAYNO, iwm , waxayna is hor tubeen Madaxtooyada horteeda, cidina lama ay hadal oo afar askari oo qoryaha koogaraystay, markiiba waa la cannaantay, oo waxaa lagu yidhi iyadoo dadweynuhu daawanayaan , yaa idin yidhi la hadla Ardada .
Waxa ay hadana u soo kaceen dhinaca wadada tagta Maxkamadaha ilaa intaas cidi lama ay hadal ayaa askartii Madaxtooyada ee ilaalinaysay dhinaca dambe ee Madaxtooyada ee Masaarida gurigeeda eegaysay ay rasaas ku bilawday.
Warar lagu kalsoon yahayna waxa ay sheegayaan inuu iibiyey ina rayaale wejehadii Dugsiga sh. Bashiir ee dhinaca Dahabshiil eegaysa kiyo dhinaca maaweel Hotel eegaysa.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Monday, May 04, 2009